Apple inoda kuvandudza mameseji mune yechishanu beta ye macOS 10.13.3 | Ndinobva mac
Apple inoda kuvandudza mameseji mune yechishanu beta ye macOS 10.13.3
Nezuro iwe tinozivisa apuro iro yakanga yaburitsa iyo yechishanu beta yeshanduro yazvino yeMacOS High Sierra yevagadziri. Kana beta ikaburitswa, Apple kazhinji haikurumidze kutaurirana shanduko dzakawedzerwa, kunze kwekugadziriswa kwezvikanganiso zvinotarisirwa. Iye anozvimisikidza iye kuti ataure nezve iyo Kugadziriswa kwezvipenga uye kugadzirisa kugadzikana kwesisitimu.
Asi iyi kesi yaita mutsauko mupfupi uchienzaniswa nemabheja apfuura. Vamwe vashandisi vakacherekedza katsamba, kusvika pakuvapa kuti vanzwisise kuti yaive yekupedzisira vhezheni. Kune rimwe divi, vamwe vashandisi havana kuwana yakadaro mhinduro.
Chaizvo, 3 Mac inoverengwa panowanikwa meseji ine ruzivo rwe shanduko yeiyi vhezheni nyowani. Uye zvakare, yemakomputa matatu, imwe yacho yaive yekuisa yeruzhinji betas. Ndokunge, uyu meseji wainyorerwa kwete kune anoshanda ekuvandudza nyanzvi, asi kumutengi asina zvimwe kubva kuApple. Muchikamu chemeseji iyi, paive paine chinongedzo chekutarisa iyo gadziriso zvakadzama. Asi kana uchidzvanya pairi, zvakatitungamira kune iyo Apple peji iro rakapa kukanganisa. Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti mumwe munhu kuApple akasiya "yakasununguka tambo", mune iyi kesi haina kukosha, asi ndeimwezve muketani yezvikanganiso mumwedzi ichangopfuura.
Vashandisi vaive nemeseji iripo, mhinduro ye Messages app zvine chekuita nenyaya. Sezviri pachena, yakagadzirisa nyaya inogona "kushandura kwechinguva kurongeka kwekutaurirana muMessage." Mune mamwe mamiriro ezvinhu, tinowana mhinduro pamberi pemubvunzo, uye kwete pazasi sezvayaifanira kuve. Zvese zvinoratidza kuti idambudziko chairo, rinovhiringidza, asi iro parizvino rinowanzozvigadzirisa.
Chero zvazvingaitika, matambudziko eMessage ekufananidza akagadzira zvimwe zve "musoro" weApple. Pamwe kuyananiswa pakati peIOS neMacOS kunofanirwa kuwedzeredzwa, uye zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti Apple iri kushanda pairi mune yekupedzisira vhezheni ye macOS 10.13.3
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inoda kuvandudza mameseji mune yechishanu beta ye macOS 10.13.3